Roy Horn akapisa, wenguva refu mudariro mudiwa Siegfried achichengeta madota - Nhau
Kuru Blog Style Varaidzo Nhau
Roy Horn akapisa, wenguva refu mudariro mudiwa Siegfried achichengeta madota
Pave nemazuva mashoma kubva Roy Horn akafa , asi vaviri vane mbiri Siegfried & Roy vadzoka pamwe chete.
Mubvunzurudzo nyowani nechinyorwa cheGerman Bild, Siegfried Fischbacher akati shamwari yake yemakore yakareba yapiswa uye madota ari kuchengetwa mutembere panzvimbo yediki ye Little Bavaria estate muLas Vegas.
'Urn yake inogara neni,' Siegfried akadaro, kuburikidza neLas Vegas Review-Journal. 'Ndakaiisa muchechi yedu. Takakurukura izvozvo munguva yeupenyu hwedu. Roy haana kumbobvumidza urn yaamai vake naJohanna neyeye mhuka dzedu dzakafa kuvigwa, asi akazvichengeta muimba yake yekurara. '
Roy, uyo akamborarama zvine mukurumbira pakurwiswa kwe tiger panguva yeSiegfried & Roy's Las Vegas show, akashaya musi waMay 8 wematambudziko eCovid-19 .
'Ndakagara mutemberi yandakavakirwa naRoy pane yedu Little Bavaria estate, pakati payo neimba yangu,' Siegfried akaudza chibvumirano cheGerman. 'Ndinonzwa rugare nekuti Roy akarara murunyararo. Uye achiri neni chero kwandinoenda. '
Siegfried akajekesa kuti iye nemadota aRoy vacharamba vari muLas Vegas zvachose.
Siegfried & Roy's kuvapo paLas Vegas Strip haigone kuderedzwa. Mune '90s, refu pamberi pekupinda kweCirque du Soleil uye nzvimbo yepamusoro yekugara inoratidza , kuita kwavo kwaive kupokana tikiti rinopisa kwazvo mudhorobha. Iyo showa, zvakadaro, yakasvika pakaerekana uye inokatyamadza kupera munaGumiguru 2003 apo Roy akarwadziswa neiyo hombe-kati Mantecore panguva yekurarama show. Nhengo dzevateereri dzakasara dzichishamisika apo mhuka iyi yakadhonza Roy kubva pachikuva mumuromo wayo.
robert kardashian uye blac chyna
Mumakore anotevera kupera kwekukurumidza kwechiratidziro chavo, vaviri vacho vakapedza nguva yekuratidzira kunzvimbo yavo ye Little Bavaria.
'Handisi kuzodzoka [kuGerman],' Siegfried akadaro. 'Roy akavakira' Little Bavaria 'kwandiri; Handife ndakasiya izvozvo. Ari kwese kwese. Mumba, mugadheni. '
Akawedzera, '[Roy] zvino afamba nepamagedhi edenga, asi mweya wake wagara neni. Little Bavaria ikozvino yave chiyeuchidzo kune hushamwari. Uye imba yaRoy inogara nekusingaperi. '
Mel B anobvuma Spice Vasikana kushanya kwaive 'kusanzwisisika' mushure mekudonhedza Geri Horner husiku-humwe kumira bhomba.
isakatie holmes ane nhumbu yemwana wajamie foxx
jana kramer murume bonde akapindwa muropa
chii chiri kuitwa na sally jesse raphael izvozvi
heidi klum achiri mudiki
flip kana flop mukomana mufananidzo